ISt Eustatius yaseSt
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » St Eustatius » ISt. Eustatius: Akusayi kubakho bantu bodwa abagciniweyo abagonyelweyo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeCaribbean • Abahlobo eTurboNews • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • St Eustatius • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
ISt. Eustatius: Akusayi kubakho bantu bodwa abagciniweyo abagonyelweyo
Matshi 19, 2021
Matshi 21, 2021
Abahlali baseStatia abagonywe ngokupheleleyo akudingeki ukuba bangene bodwa xa bengena eStatia emva kokuhambela phesheya
ISt. Eustatius iya kuwanciphisa amanyathelo okuvalelwa ngo-Epreli 11, 2021
Abahlali baseStatia ababuya phesheya kusafuneka ukuba babe novavanyo olubi lwe-PCR
Amanyathelo okunciphisa awasebenzi kubakhenkethi, nokuba bagonyiwe
IQumrhu loLuntu iSt. Eustatius liza kuwanciphisa amanyathelo ukusukela ngomhla we-11 ku-Epreli 2021. Abahlali baseStatia abagonywe ngokupheleleyo akufuneki bangene bodwa xa bengena eStatia emva kokuhambela phesheya. Le ndlela yokunciphisa ayisebenzi kubakhenkethi.
Isigqibo sokwenza lula amanyathelo sithathiwe emva kokucingisisa ngononophelo nasemva kothethwano olubanzi neSebe lezeMpilo, eleNtlalontle kunye nezeMidlalo eNetherlands (VWS), iZiko leSizwe lezeMpilo kunye neNdalo (i-RIVM), ugqirha wezifo eSaba, uMnu. Koen , iSebe lezeMpilo likaRhulumente kunye neQela loLawulo lweeNtlekele eStatia.
Kufuneka kwenziwe uvavanyo lwePRC
Abahlali baseStatia ababuya phesheya kusafuneka ukuba babe novavanyo olubi lwe-PCR, kodwa oku kusebenza kuphela xa kutyelelwe ilizwe elinomngcipheko omkhulu. Uvavanyo olukhawulezileyo (antigen) luyimfuneko nakwiintsuku ezi-5 emva kokubuyela eStatia. Ukongeza, ukujija kwezentlalo nokunxiba imaski yobuso kunyanzelekile kwiintsuku ezi-5 zokuqala emva kokungena. Kananjalo, akuvumelekanga ukuya kwimisitho enabantu abangaphezu kwama-25 abakhoyo ngeentsuku ezintlanu zokuqala kwaye abantu baseStatiya ababuyayo kufuneka bathobele imigaqo yezempilo ngezi ntsuku njengokuhlamba izandla rhoqo.
Amanyathelo okunciphisa awasebenzi kubakhenkethi, nokuba bagonyiwe.
Abantwana ebebekwelinye ilizwe kwaye bebuya kumazwe abasemngciphekweni omkhulu abavumelekanga ukuba baye esikolweni okanye kukhathalelo lwabantwana iintsuku ezintlanu. Abantwana abakwiminyaka yobudala emi-5 nangaphezulu baya kuvavanywa emva kweentsuku ezintlanu. Nangona kunjalo, kubantwana abaneminyaka eli-4 nangaphezulu, amanyathelo ahlukeneyo ayasebenza. Kuya kufuneka bangene bodwa xa befika iintsuku ezili-5. Oku kunokwenziwa kwindlu enye njengabazali babo, kodwa kwigumbi elahlukileyo. Umahluko phakathi kwala maqela obudala wenziwa ngenxa yokuba abantwana abangaphezulu kweminyaka eli-12 behlala besasaza intsholongwane ye-COVID-10 kunabantwana abaphakathi kweminyaka emi-12 neli-19.
Utyelelo losuku eSt. Maarten
Abantu abagonywe ngokupheleleyo ngamayeza amabini esitofu sokugonya iModerna banokundwendwela iSt. Maarten usuku olu-1, ngaphandle kovavanyo, nangaphandle kwesidingo sokuya bodwa bakuba babuyele eStatia. Le ndlela yokunciphisa iyasebenza kuphela xa inani leemeko ze-COVID-19 ezisebenzayo eSt Maarten zingaphantsi kwe-100 ngeveki.
Abasebenzi abangenayo abagonywe baya kuvavanywa ngokwamatyala. Nangona kunjalo, ukuvalelwa yedwa kuyafuneka ngaphandle kokuba uhlobo lomsebenzi luvumela ulawulo olulula.
Okwangoku iZiko likaRhulumente iSt. Eustatius lisebenza kwimephu eya kubandakanya amanyathelo athile okuqhubeka nokuvula iStatia. Le mephu yendlela izakuqala ixoxwe kunye ne-Central Committee kwiveki ezayo.
ISebe lezeMpilo likaRhulumente liza kuqala ukusebenzisa idosi yesibini yesitofu nge-22 kaFebruwari, 2021. Ukuza kuthi ga ngoku ngabantu abangama-765 abagonywe ngeedosi zokuqala zokugonya iModerna, ethe kratya ngaphezulu kwama-30% abantu abadala. ISebe lezeMpilo loLuntu liza kuqala ukusebenzisa idosi yesibini yesitofu ngoMvulo, Matshi 22nd, 2021. Ukuya kuthi ga kubantu abangama-765 abafumene idosi yokuqala, ethe kratya ngaphezulu kwama-30% abantu abadala.